Global Voices teny Malagasy » Tsy Mitsahatra Velively Ny Ady Amin’ny Fanamombàna Ao India · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Marsa 2018 5:33 GMT 1	 · Mpanoratra VideoVolunteers Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Fahasalamàna, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Ity lahatsoratra ity dia angona lahatsoratra telo avy amin'i Madhura Charkraborty  sy Alankrita Anand  ary nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers , fikambanana fiarahamonin'ny media iraisampirenena efa nahazo loka ao India.
Manana tantara matroka  momba ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana amin'ny mponina i India, izay mikendry ny mahantra sy ny tsy manan-katao. Hatramin'ny taona 1975, taonan'ny “The Emergengy (Latsaka An-katerena)” , izay nanerena lehilahy 6,2 tapitrisa ho momba tamin'ny hetsika iray voatsikera mafy, ny vehivavy no tena mizaka ny enta-mavesatra amin'ny fampihenana ny fiterahana Mitatitra momba ny fitomboan'ny tranga fanaovana ho momba an'ireo vehivavy mahantra sy tsy misy fankatoavan'izy ireo eny amin'ny tobim-pahasalamam-panjakana ireo mpitati-baovaon'ny fiarahamonina Video Volunteer (Lahatsarin'ny Mpirotsaka an-tsehatra).
Tamin'ny taona 2013-14, fanamombàna 4 tapitrisa  no natao tany India, ka 100 000 monja no natao tamin'ny lehilahy. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa mandany 85% amin'ny teti-bolany amin'ny fandrindrana ny fianakaviana amin'ny fanamombàna i India. Tamin'ny taona 2014, vehivavy 15 no maty tao amin'ny fanjakan'i Chhattisgarh  noho ny fanamombàna tandrevaka tao amin'ny tobim-panjakana.
Tamin'ny taona 2015-16, 82% amin'ireo vehivavy izay natao momba no nanao izany tany amin'ny foibem-panjakana. Tamin'ireo nampiasa pilina tsy mampiteraka, mihoatra ny antsasaky (54%) no nanao izany tany amin'ny toerana tsy miankina. Ho an'ny fandrindrana ny fianakaviana, nanome famatsiam-bola 85% amin'ny fanamombàna ny governemanta, 13,5% amin'ny fitaovana, karama, ary 1,5% amin'ny fomba hafa
Manasongadina sary iray manontolo momba ny fomba fijerin'ny governemanta Indiana sy ny fomba fitondrany ny vehivavy ny fampahalalana etsy ambony. Nandritra ny 20 taona mahery nanomboka tamin'ny sehatra hetsika Beijing  nampiatranoan'ny Vehivavin'ny Firenena Mikambana, ary nahitana karazana fiovàna niala tamin'ny “fifehezana ny mponina” ho amin'ny lahateny mifantoka amin'ny “safidy” sy “fahasalamana ara-pananahana”, tsy dia nisy zavatra niova teny ifotony ho an'ireo vehivavy ao India. Tamin'ny taona 1991, nanatontosa horonantsary fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe Something Like A War (Zavatra Tahaka Ny Ady)  i Deepa Dhanraj, naka sary tao anatin'ny efitry ny hopitaly izay nirehareha be momba ny fanatanterahana fanamombàna an-jatony isan'andro ireo dokotera, izay asiana anestezia kely ireo vehivavy no sady nambenana basy mba hanakanana azy ireo tsy hitabataba rehefa manamomba azy ireo ny dokotera.
Na dia izany aza, nisy zavatra iray niova nanomboka teo — nafenina ambanin'ny anarana ‘fahasalaman'ny reny’ ankehitriny ny rafitra fanaraha-maso ny mponina ka anaovana fihatsarambelatsihy fa “safidin’ ny” vehivavy ao amin'ny fahasalamana ara-pananahana ny Janani Suraksha Yojana . Mbola vehivavy miaina eo ambanin'ny tokonam-baravaran'ny fahantrana any an-tanàna ambanivohitra sy ambany tanàna misy ireo mahantra no mpandray anjara amin'ity rafitra ity, avy amin'ny vondrom-piarahamonina vitsy an'isa tahaka ny Dalits sy ireo izay tsy afaka mahazo fitsaboana manokana ny ankamaroan'izy ireo.
Mitatitra ny mpanangom-baovao ao amin'ny fiarahamonina Video Volunteers:
Ao anatin'ny horonantsary etsy ambony,  resahina ao fa lehilahy 0,3% monja no iharan'ny fanamombàna ary 36% ny vehivavy. Ny antony? Mihevitra i Nandu, 35 taona, avy any Uttar Pradesh fa tsy tokony atao momba ny lehilahy satria manao asa “sarotra” izy ireo fa ny vehivavy kosa manao “asa mahazatra”. Niombon-kevitra taminy ny vadiny, Manju.
Ity horonantsary ity dia mampiseho ny fepetra ratsy ao amin'ny toeram-piterahan'ny vehivavy ao India, izay vehivavy 5 isan'ora no maty eo am-piterahana.
Tamin'ny taona 2015, mpanao gazety iray nitatitra momba ny fepetra  iainana ao amin'ny efitrano fiasàna ao amin'ny iray amin'ireo hopitalin'ny lehiben'ny governemanta sady toeram-pampianarana ao Kolkata, metrôpôla. Matetika voafelak'ireo dokotera sy mpanampy mpitsabo ireo vehivavy mihetsi-jaza ao anatin'ny fanaintainana satria mitabataba. Ny olana amin'ny fikendrena ireo vehivavy voahilikilika amin'ny zava-drehetra avy amin'ny tobim-piterahana hatramin'ny fanamombàna sy ny rafitra fanarahamaso Depo-Provera  tsy misy fampahafantarana, dia itovizana betsaka amin'ny fihetsik'i India amin'ny fampihenana ny fiterahana sy ny tobim-panamombàna terena fahiny tamin'ny fitantanan'i Sanjay Gandhi. Maro no mahatsapa fa mampiseho fironana amin'ny fifehezana ny isan'ny zaza ateraky ny mahantra ihany ny politika indiana.
Ary misy ny tranga manafintohina momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy amin'ny fiterahana. Nihena mafy hatrany  ny fampiasana fanabeazana aizana ho an'ny lehilahy ao India nandritra ny folo taona farany, izay nihena 52 isanjato ny fampiasàna fimailo. Na dia izany aza, mbola mandrisika hatrany amin'ny fanabeazana aizana ho an'ny vehivavy ny governemanta amin'ny politika toy ny National Health Mission sy ny eny ifotony.
Mitatitra i Bikash Barman, mpikambana ao amin'ny Video Volunteers fa tsy mety miditra hopitaly ny ankamaroan'ny vehivavy bevohoka any an-tanànan'i Kalpani any amin'ny distrikan'i Cooch Behar ao Bengal Avaratra, satria matahotra fampidirana fitaovana anatin'ny tranon-jaza.
Ao amin'ny lahatsary iray, iray tamin'ireo vehivavy 30 niteraka tao amin'ny toeram-pitsaboana ara-panjakana noterena hampidirana fitaovana fanabeazana aizana anaty tranon-jaza nilaza hoe:
Tsia, tsy manaiky hampidirana copper-T aho.
Mampiseho ny fikarohana  fa manana fitondrantena te ho salama kokoa ny fizakantenan'ny vehivavy mihabetsaka. Mahomby kokoa tsy tahaka ny fanamombàna ny fanentanana hampihemotra ny fitondrana vohoka mba hampihenana ny tahan'ny fiterahana. Saingy mila fanovana ny toetsaina patriarka manoloana ny vehivavy sy ny fomba fiheveran'ny fiarahamonina azy ireo izany rehetra izany. Ny fanovana izany toe-tsaina izany ao an-trano sy eny amin'ny andrim-panjakana no asa goavana tsy afaka raketina amin'ny tanjona ara-tarehimarika toy ny fahafatesan'ny reny eo am-piterahana. Ary mandra-pahavitantsika izany fiovana izany amin'ny fitenintsika ara-politika, raisina ho fanaovana fanandramana (cobaye) hatrany ny vehivavy.
Avy amin'ny vondrom-piarahamonina atao anjorom-bala ao India ireo mpirotsaka an-tsehatra ao amin'ny Video Volunteer ary mamokatra lahatsary momba ireo tantara tsy voatatitra. “Vaovao avy amin'ireo izay miaina izany” ireo tantara ireo. Manolotra votoaty tena misy ao an-toerana mba hitantarana momba ny zon'olombelona manerantany sy ny fanamby ho amin'ny fampandrosoana izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/27/116756/
 tantara matroka: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-30040790
 “The Emergengy (Latsaka An-katerena)”: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emergency_(India)
 fanamombàna 4 tapitrisa: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-30032878
 sehatra hetsika Beijing: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
 Something Like A War (Zavatra Tahaka Ny Ady): https://www.youtube.com/watch?v=6Fq7HSIPVq4
 mpanao gazety iray nitatitra momba ny fepetra: https://qz.com/422338/in-horrific-indian-hospitals-women-in-labour-are-slapped-when-they-scream/
 rafitra fanarahamaso Depo-Provera: https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-shot
 Nihena mafy hatrany: http://www.indiaspend.com/cover-story/driven-by-male-reluctance-indias-contraceptive-use-falls-population-surges-61626
 Mampiseho ny fikarohana: http://paa2010.princeton.edu/papers/101043